Waxaa aqbalay Ciise, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Masiixiyiintu badanaa waxay ku dhawaaqaan farxad: "Ciise wuu aqbalaa qof walba" iyo "qofna ma xukumo". In kasta oo dammaanad-qaadyadaani dhab yihiin, haddana waxaan arki karaa in la siiyay macno kaladuwan oo kaladuwan. Nasiib darrose, qaar iyaga ka mid ah ayaa ka leexday muujinta Ciise sida loogu sheegay Axdiga Cusubi.
Wareegtada hay'adda 'Grace Communion International' weedha waxaa badanaa la adeegsadaa: "Adigaa iska leh". Qoraalkan fudud wuxuu muujinayaa waji muhiim ah. Laakiin sidoo kale si ka duwan ayaa loo tarjumi karaa (waana dhici doonta). Maxay run ahaantii ka tirsan yihiin? Ka jawaabista su'aalahan iyo kuwa la midka ah waxay u baahan yihiin taxaddar maxaa yeelay waa inaan aaminsanahay iimaanka si aan uga saarno arrimaha isbarbar dhigga ah si aan u sii ahaano kuwa aaminka u ah muujinta Baybalka.
Dabcan Ciise wuxuu u yeedhay qof walba naftiisa, wuxuu isu dhiibay dhamaan kuwa u jeestay oo cilmigiisa siiyey. Haa, wuxuu u ballanqaaday dhammaan kuwa dhagaysta isaga inuu isagu dadka oo dhan u soo jiidan doono (Yooxanaa 12:32). Runtii, ma jiraan wax caddayn ah oo ah inuu diiday qofna, ka leexday qof, ama diiday inuu la kulmo qof u soo dhowaaday. Hase yeeshe, wuxuu sidoo kale fiiro gaar ah siiyay kuwa loo arkaayay inay yihiin kuwa laga soocay hoggaamiyeyaashii iimaanka ee waqtigiisa, oo xitaa wuu la wada cunay.
Waxaa si gaar ah cajiib ah in Kitaabka Quduuska ah uu yaqaan sida loo soo sheego in Ciise uu sidoo kale soo dhoweeyay baraska, curyaannada, indhoolaha, kuwa dhegaha la 'iyo kuwa carrab la' oo la hadlay. Wuxuu sii waday xiriirkii uu la lahaa (mararka qaarkood su'aal laga weydiin waayey) dadka, ragga iyo dumarka, oo iska indhatiray waxa uu rumeysan yahay waqtigiisa sida uu ula macaamilay. Wuxuu kaloo la macaamilay dhillayo, cashuur-bixiyeyaasha Yuhuuda ee hoos yimaada xukunka Roomaanka iyo xitaa fanaaniin, anti-Roman, u ololeeya arrimaha siyaasadeed.
Wuxuu sidoo kale waqti la qaatay Farrisiintii iyo Sadukiintii, kuwaas oo ka mid ahaa kuwa aadka u dhaliila (oo qaarkood ay durbadiiba si qarsoodi ah u qorsheynayeen dilkiisa). Rasuul Yooxanaa wuxuu noo sheegayaa in Ciise uusan u imaan inuu xukumo laakiinse inuu badbaadiyo oo uu dadka badbaadiyo doonista rabitaanka Eebbe. Ciise wuxuu yiri: "[...] qof kasta oo ii yimaada, anigu isagaama riixi doono" (Yooxanaa 6:37). Wuxuu sidoo kale xertiisii ​​baray inay jeclaadaan cadowgooda (Luukos 6:27) in la cafiyo kuwa iyaga ku xadgudbay iyo in loo duceeyo kuwa habaaray (Luukos 6, 28). Markii la dilayay, Ciise xitaa wuxuu cafiyey kuwii dilay (Luukos 23, 34).
Tusaalooyinkaan oo dhami waxay muujinayaan in Ciise u yimid waxtarka dhammaan. Wuxuu dhinac walba taagnaa, wuxuu ahaa "qof walba". Waxay u taagan tahay nimcada Ilaah iyo madax furashada, oo ay kujirto qof walba. Qaybaha haray ee Axdiga Cusub waxay ka turjumayaan waxa la oggolaaday
waxaan ku aragnaa Injiillada ee nolosha Ciise. Bawlos wuxuu tilmaamay in Ciise u yimid dhulka inuu badbaadiyo dembiyada kuwa aan cibaada lahayn, iyo dembiilayaasha, kuwa “dhintay xadgudubyada iyo dembiyada” (Efesos 2: 1) waxay ahayd in la cafiyo.
Dabeecadaha Badbaadiyaha iyo falalkiisu waxay markhaati ka yihiin jacaylka Ilaah u qabo dadka oo dhan iyo damaciisa ah in lala heshiiyo oo la duceeyo. Ciise wuxuu u yimid inuu nolosha siiyo oo tan "wax badan" (Yooxanaa 10:10; Good News Bible). "Ilaah wuxuu ku jiray Masiixa oo wuxuu la heshiisiiyey dunida naftiisa" (2 Korintos 5:19). Ciise wuxuu u yimid sidii Badbaadiyaha dembiyadooda uu ku furtay iyo sharkii maxaabiista kale.
Laakiin waxaa jira waxbadan oo ku saabsan sheekadan. A "inbadan" oo aan sinaba loola muuqan karin is burinaya ama xiisadda ka dhexeysa midka hadda ifaya. Ka soo horjeedda aragtida dadka qaarkood, looma baahna in loo maleeyo in ay jiraan jagooyin iska hor imaad ah oo ka dhex jira qalbiga ugu hooseeya ee Ciise, fikirkiisa iyo masiirkiisa. Looma baahna in la aqoonsado fal isu dheelitir gudaha ah nooc kasta oo iskudaya hal jiho ka dibna saxa kan kale. Mid ka mid ah maahan inuu rumaysto inuu Ciise isku dayay inuu heshiisiyo laba arrimood oo iimaan leh oo tilmaamaya jihooyin kala duwan, sida jacaylka iyo caddaaladda ama nimcada iyo qoduusnimada. Waxaan ka fikiri karnaa mawqifyada is khilaafsan ee dembiyadeenna, laakiin ma ahan qalbiga Ciise ama aabihiis.
Sida Aabbaha, Ciise wuu soo dhaweynayaa qof walba. Laakiin wuxuu taas ku sameeyaa codsi gaar ah. Jacaylkiisu waa xaalad-dejin. Wuxuu ku qasbay qofkasta oo dhagaysta inuu muujiyo wax had iyo jeer qarsoon. Wuxuu u yimid inuu hadiyad ka tago gaar ahaan iyo inuu qof walba ugu adeego hagitaan, qaab ku jiheysan.
Soo dhaweyntoodii qof walbaa waa dhibic dhammaadka marka loo eego bilowga xiriirka joogtada ah, joogtada ah. Xiriirkaas wuxuu ku saabsan yahay bixinta iyo u adeegida iyo aqbalidda wixii uu na siinayo. Waxna nama siinin wax waqtigiisii ​​ku eg yahay ama si caadi ah uguma adeegto (sida aan door bidnay). Saas ma aha, wuxuu na siiyaa kaliya waxa ugu fiican ee uu dhiibi karo. Taasina waa isaga laftiisa, taasna wuxuu ina siiyaa jidka, runta iyo nolosha. Wax intaa ka badan iyo wax kale ma jiraan.
Dabeecadda Ciise iyo ficilkiisa soo dhoweyntu waxay u baahan yihiin falcelin gaar ah oo ku saabsan bixinta naftiisa. Ujeedka, waxay u baahan tahay aqbalaadda waxa uu bixiyo. Taa bedelkeed aragtidan, isagoo mahadnaqa aqbalaya hadiyaddiisa, ayaa ah waxa uu diido, oo ay la mid tahay inuu naftiisa diido. Isaga oo u jiheeya dadka oo dhan xaggiisa, Ciise wuxuu filaayaa jawaab wanaagsan oo ku saabsan dalabkiisa. Oo sida uu tilmaamay, jawaab celinta togan waxay ubaahantahay dabeecad gaar ah xagga isaga.
Sidaa daraaddeed Ciise wuxuu xertiisii ​​u sheegay in boqortooyadii Ilaah ku dhow dahay. Barakadiisa oo dhammuna way ku diyaar yihiin isaga. Laakiin sidoo kale wuxuu isla markiiba farta ku fiiqaya falcelinta ay runtu tahay xaqiiqada dhabta ah ee iimaanku inuu ku lug leeyahay: “Toobad keena oo rumayso injiilka" boqortooyada jannada soo socota. Diidmada toobad keenista iyo rumaynta Ciise iyo boqortooyadiisa waxay la mid tahay diidmada naftiisa iyo barakooyinka boqortooyadiisa.
Diyaar u noqoshada inaad toobad keento waxay u baahan tahay is-hoosaysiin. Ciise wuxuu filanayaa in aqbalaaddaas laftiisa la aqbalo markii uu na soo dhoweeyo. Sababta oo ah is-hoosaysiin kaliya ayaan ku heli karnaa wuxuu soo bandhigo. Waa in la ogaadaa in hadiyaddiisa nala siiyay ka hor inta uusan ficil noocan oo kale ah uusan ku dhicin. Si adag ugu hadlida, waa hadiyadda naloo siiyo kicinta ficil celinta.
Toobad keena iyo iimaanku waa fal-celinta la socota aqbalaadda hadiyadda Ciise. Iyagu shardi kuma ahan arrintan, kumana xirna cidda uu u samaynayo. Ujeeddadiisa waa in la aqbalaa oo aan la diidin. Waa maxay faa'iidada ay leedahay diidmada noocan ahi? No.
Aqbalitaanka mahadnaqa ee dembigiisa kafaaraggudka ah, oo Ciise had iyo goor u xiisooday, waxaa lagu muujiyey tiro badan oo ka mid ah ereyadiisa: "Wiilka Aadanahu wuxuu u yimid inuu baadho oo badbaadiyo kuwa lumay" (Luukos 19:10; Good News Bible). "Ma ahan kuwa caafimaadka u baahan dhaqtarka, laakiin waa kuwa buka" (Luukos 5, 31; ibid.). "Runtii waxaan idinku leeyahay, Ku alla kii aan boqortooyada Ilaah u aqbalin sida ilmo yar oo kale ma geli doono" (Mark 10:15). Waa inaan noqon sida ciidda abuur abuurka ah, kaasoo “erayga farxad ku aqbalaya” (Luukos 8, 13). "Marka hore doondoona boqortooyadii Ilaah iyo xaqnimadiisa [...]" (Matayos 6:33).
Aqbalida hadiyadda Ciise iyo ka faa iideysiga gargaarkiisa waxay u baahan tahay garashada inaan lunnay oo ay tahay inaan helno, inaan jiran nahay oo aan u baahanahay dhakhtar ina daaweyn kara, inaan la wadaagi karno rajo la'aan is weydaarsiga labada dhinac. kaalay gacan sayidkeenna. Sababtoo ah sida ilmo oo kale, uma qaadan karno inaan haysanno wax uu isagu u baahan yahay. Taasi waa sababta Ciise u tilmaamay in ay yihiin kuwa "sabool ahaan xagga ruuxa" ah oo hela barakada Ilaah iyo boqortooyadiisa jannada, oo aan ahayn kuwa isu arka inay hodan yihiin xagga ruuxa. (Matayos 5:3).
Barista Masiixiyiinta ayaa lagu gartaa aqbalaaddaan waxa Ilaah ee deeqsinimadiisa uu ku siinayo dhammaan abuurkiisa Masiixa oo tusin u ah is-hoosaysiinta. Waa dabeecad si toos ah ula socota ogolaashaha in aannaan isku filnayn, laakiin ay tahay in aan nolosha ka helno gacanta Abuuraha iyo Bixiyaha. Ka soo horjeedka aqbalaada kalsoonida
Akhlaaqdu waa tan kibirka. Marka laga hadlayo barashada Masiixiga, dareenka madaxbanaanida Eebbe, aaminaadda naftaada oo keliya, isku filnaanshaha qofka, xitaa wejiga Ilaah, waxaa lagu muujiyaa kibir. Kibirka noocan oo kale ah waxaa ka xuntahay fikirka ah ubaahan wax shay ah oo Ilaah muhiim u ah, iyo gaar ahaan dambi dhaafkiisa iyo nimcadiisa. Kadib faanku wuxuu horseedaa diidmadaas is-xaq-darrada ah ee ah in la aqbalo shay lagama maarmaan ah oo ka timaadda Ilaaha Qaadirka ah, kaasoo qofku ku fikiro in la daryeelayo. Waxaan ku faraxsanahay inaan awood u leenahay inaan waxwalba kali kali ku kalno oo aan u qalano inaan goosanno midhaha ka dhashay. Wuxuu ku adkaysanayaa in aanu u baahnayn nimcada Ilaah iyo naxariistiisa, laakiin inuu isagu isu diyaariyo nolosha ku habboon baahiyihiisa. Kibirku wuxuu ku guuldarreysanayaa inuu u hibeeyo qof ama hay'ad kasta, oo uu ku jiro Ilaah. Wuxuu cadeeyay xaqiiqada ah in wax anaga naga jirin aanu u baahnayn in la beddelo. Qaabka aan u nahay, waa mid wanaagsan oo qurux badan. Taa bedelkeeda, is-hoosaysiinta waxay aqoonsan tahay inaadan naftaada xakamayn karin. Taabadalkeed, waxay ku qanacday kaliya ma u baahan tahay caawimaad, laakiin sidoo kale in la beddelo, cusboonaysiinta, dib-u-soo celinta iyo dib-u-heshiisiinta, oo ah Ilaaha keliya ayaa bixin kara. Is-hoosaysiinta ayaa garwaaqsan guuldarradeenna aan la is cafiyi karin iyo awood-darrkeenna xad-dhaafka ah si aan nafteenna u soo saarno wax cusub. Waxaan u baahanahay nimcada Ilaahay oo dhan isku duuban, ama aan lunno. Kibirkayagu waa inuu keenaa inuu dhinto si aan nolol uga helno xagga Eebbe qudhiisa. Maskaxda furan si loo helo waxa Ciise inoogu deeqay iyo is-hoosaysiinta lama kala saari karo.
Ugudambeyntii, Ciise wuxuu soo dhaweynayaa qof walba inuu isu dhiibo iyaga. Soo dhaweyntiisu waa ujeeddooyin-ku-saleysan. Waxay ku hogaamisaa meel. Ujeedadiisu waa daruuri waxaa ka mid ah waxa u baahan isku darista laftiisa. Ciise wuxuu tilmaamay inuu u yimid inuu karti siiyo aabihiis oo la caabudo (Yooxanaa 4,23). Waa habka ugu dhameystiran ee lagu tilmaamo macnaha soo dhoweynta iyo aqbalida nafteena. Cibaadada, waxaa si cad loo cadeeyay in Eebbe yahay kan u qalma aaminaaddeena aan burburin karin iyo daacadnimadiisa. Is dhiibistii Ciise naftiisa ayaa horseedaysa aqoonta saxda ah ee Aabaha iyo rabitaanka u oggolaashada in Ruuxa Quduuska ahi ku dhex shaqeeyo. Waxay u horseedaa caabudaadda keliya ee Eebbe awoowe wiilka oo hoos yimaada ficillada Ruuxa Quduuska ah, caabudaadda Eebbe run iyo ruux ahaanta. Maxaa yeelay Isaga nafsaddiisa aawadeed, Ciise wuxuu naftiisa u huraa sida Rabbigeenna, Nabigeenna, Wadaadka iyo King. Sidaas ayuu ku muujiyaa Aabbaha oo wuxuu inoo soo diraa Ruuxiisa Quduuska ah. Wuxuu siiyaa si waafaqsan qofkii uu yahay, ma aha kan uusan ahayn, sidoo kale kuma xirna rabitaankeena ama fikradaheena.
Taasina waxay ka dhigan tahay in jidka Ciise u baahan yahay xukun. Sidan ayaa loo kala saaraa jawaab celinta ay u leedahay. Wuxuu aqoonsan yahay kuwa caaya isaga iyo ereygiisa, iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda aqoonta dhabta ah ee Ilaah iyo cibaadadiisa saxda ah. Wuxuu kala saaraa kuwa qaata iyo kuwa aan qaadan. Si kastaba ha noqotee, kala soocitaankan micnaheedu maahan in aragtidiisa ama ujeeddadiisu ay si uun uga duwan yihiin kuwa aan kor ku soo sheegnay. Marka ma jirto sabab loo maleyn karo inuu jacaylkiisu hoos u dhacay iyadoo loo eegayo qiimeyntan ama inuu u rogay dhanka ka soo horjeedka. Ciise ma cambaareynaayo kuwa diida soo dhaweyntiisa, casuumaaddiisa in la raaco. Laakiin wuxuu uga digayaa cawaaqibka diidmada noocan ah. In la aqbalo Ciise iyo in la soo maro jacaylkiisa ayaa u baahan falcelin gaar ah, maahan fal celin ama haba yaraatee.
Farqiga uu Ciise ku sameeyay inta u dhexeysa jawaab celinta kala duwan ee uu helo waxay ku caddahay aayadaha badan ee Qorniinka. Sidaa darteed masaalku wuxuu ka hadlayaa abuur iyo abuur (meesha abuurku u taagan yahay eraygiisa) luqad aan la dafiri karin. Waxaa jira afar nooc oo ciid ah oo kala jaad ah, hal aagna waxay u taagan tahay soo jiidashada miraha leh ee Ciise filayay. Marar badan, wuxuu galaa sida isaga, eraygiisa ama wax baristiisa, Aabbihiisa jannada ku jira iyo xertiisa loo aqbalo ama loo diido. Markay xertii ka leexdeen oo ka tageen, Ciise wuxuu weyddiiyey haddii laba-iyo-tobankii la socday inay doonayeen inay sidaas oo kale yeelaan. Caannimada caanka ah ee Butros wuxuu akhriyaa: “Sayidow, xaggee baan tegaynaa? Waxaad haysataa ereyo nolosha weligeed ah " (Yooxanaa 6,68).
Erayadii aasaasiga ahaa ee Ciise, ee uu dadka u soo bandhigo, ayaa ka muuqda wicitaankiisii: "I soo raac [...]!" (Mark 1,17). Kuwa raacayana way ka duwan yihiin kuwa aan raacaynin. Sayidku wuxuu barbardhigayaa kuwa raacsan kuwa aqbala casuumada xaflada arooska wuxuuna kaga duwan yahay kuwa diida casuumada (Matayos 22,4: 9). Khilaafaad la mid ah ayaa lagu muujiyay diidmada wiilka weyn inuu u xaadiro xafladda munaasabada soo laabashada walaalkiis ka yar, in kastoo aabihii ku booriyay inuu yimaado (Lk15,28).
Digniino deg deg ah ayaa la siiyaa kuwa kaliya oo diida inay raacaan Ciise, laakiin xitaa diida wicitaankiisa iyo sidoo kale inay ka hor istaagaan kuwa kale inay raacaan, mararka qaar xitaa xitaa si qarsoodi ah ayey ugu diyaar garoobaan dilkiisa. (Luukos 11,46; Matayos 3,7; 23,27-29). Digniintani aad ayey u awood badan yihiin sababta oo ah waxay muujinayaan waxa aan ahayn in loo sameeyo sida ku xusan digniinta mana aha waxa si rajo leh ku dhici doona. Digniinaha waxaa la siiyaa kuwa aan daneyno ee ma ahan kuwa aan annagu xiriir la lahayn. Isla jacaylka iyo aqbalaadda ayaa loo muujiyey labadaba kuwa aqbala Ciise iyo kuwa diida isaga. Laakiin jacaylka noocaas ahi sidoo kale daacad kama aha haddii uusan ka jawaabin jawaab-celinta kaladuwan iyo cawaaqibka laxiriira.
Ciise wuu soo dhaweynayaa qof walba wuxuuna ugu baaqayaa labadoodaba inay u furnaadaan isaga oo diyaar u ahaadaan - xukunka boqortooyada Ilaah. In kasta oo shabakaddu ay baahsan tahay oo abuurnimadiina ay ku fidday meel kasta, aqbalaadda naftaada, aaminaadda isaga iyo cidda ku guuleysata waxay u baahan tahay fal-celin gaar ah. Ciise wuxuu iyaga barbar dhigayaa oggolaanshaha ilmaha. Wuxuu ugu yeeraa aaminsanaanta noocaas ah ama aaminka lagu hayo. Tan waxaa ku jira tawbad keenista si aad qofka ugu aaminto qof kale ama wax kale. Aamminaaddan ayaa lafteeda ka muujisa cibaadada Ilaah xagga Wiilka iyada oo la adeegsanayo Ruuxa Quduuska ah. Hadiyadda ayaa qof walba la siin doonaa iyada oo aan boos laga helin. Ma jiraan wax shuruudo ah oo ka-faa'iideystayaasha ay meesha ka saari karaan. Aqbalida hadiyaddan shuruud la’aanta ah, si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay dadaal dhinaca qaybta qaataha ah. Tani waxay u baahan tahay ka tagitaan buuxa oo noloshiisa iyo isu dhiibitaankiisii ​​Ciise, Aabbaha iyo Ruuxa Quduuska ah oo la jooga. Dadaalku ma aha in la bixiyo Rabbiga wax kasta si uu u hamiyo inuu naftiisa nafteenna inaga siiyo. Dadaalku waa in la xoreeyo gacmahayaga iyo qalbiyadeena si aan u helno isaga oo ah Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna. Wixii aan ku helno lacag la'aan ayaa ku xiran dadaalkeena si aan uga qeyb qaadan karno; maxaa yeelay ka-jeedsashada duugga hore, musuqmaasuq xumo ayaa looga baahan yahay inuu nolosha cusub ka helo.
Waxa ay qaybteena kaga qaadanaysaa helitaanka nimcada aan shardiga lahayn waxay ku qorantahay dhammaan Qorniinka. Axdiga Hore dhexdiisa waxaa la sheegay in aan u baahan nahay qalbi cusub iyo ruux cusub, taas oo Ilaah laftiisu na siin doono maalin. Axdiga Cusubi wuxuu inoo sheegayaa inaan u baahanahay inaan dib u soo noolaano xagga ruuxa, aan u baahanahay abuur cusub, joojino ku noolaanshaha nafteenna, iyo taa bedelkeeda aan ku noolaano nolol ku hoos jirta xukunka Masiixa oo aan u baahanahay cusbooneysiin xagga ruuxa ah - oo dhowaan la abuuray ka dib Masiixa ka dhigo Adam cusub. Bentakostiga kaliya looma jeedinaayo in Eebbe soo diro Ruuxa Quduuska ah oo uu isagu iska leeyahay, laakiin sidoo kale xaqiiqda ah inaan helno Ruuxiisa Quduuska ah, oo ah Ruuxa Ciise, oo ah Ruuxa nolosha, inay tahay inaan isaga ku aqbalno isaga oo aan isaga oofino.
Tusaalooyinka Ciise waxay cadeeyeen in ficil celinta uu rajaynayo inuu ka helo hadiyadda uu ina siiyay ay ku lug yeelan doonto dadaalkeena. Maskaxda ku hay maahmaahyada luul qaaliga ah ama iibsashada duulimaad qarsoon. Jawaab bixiyaasha saxda ahi waa inay ka tanaasulaan waxkasta oo ay leeyihiin si ay u helaan waxay heleen (Matayos 13,44: 46;). Laakiin kuwa mudnaanta siiya dadka kale - ha ahaadeen dhul, guri, ama qoys - ma wadaagi doonaan ciise iyo barakadiisa (Luukos 9,59; Luukos 14,18-20).
Xiriirkii Ciise uu la sameeyey dadka wuxuu cadeeyay in raaciddiisa iyo la wadaaga barakada oo dhan ay u baahan tahay hawsha wax walba oo aan ku qiimeyno wax ka badan Rabbigeenna iyo Boqortooyadiisa. Tan waxaa ka mid ah dib-u-dejinta ee raadinta hanti maalka iyo haysashadiisa. Hogaamiyaha hodanka ah ma uusan raacin Ciise maxaa yeelay isagu naftiisa kuma kala saari karo alaabtiisa. Sidaas darteed, isagu ma uusan qaadan karin alaabtii uu Rabbigu soo diray (Luukos 18, 18-23). Xitaa haweeneyda lagu xukumay sino waxaa loogu yeeray inay nolosheeda aasaasiga u bedesho. Ka dib markii la cafiyey, waa inaysan mar dambe dembaabin (Yooxanaa 8,11). Ka fikir ninka agtiisa balliga Betesda. Waxay ahayd inuu diyaar u noqdo inuu booskiisa ka tago iyo sidoo kale naftiisa buka. "Kac, sariirtaada qaado oo soco!" (Yooxanaa 5,8, Good News Bible).
Ciise wuu soo dhoweeyaa dadka oo dhan wuuna aqbalaa, laakiin jawaab celin isaga kama tagto qof sidii hore oo kale. Sayidku jacayl laguma jeclaan doono haddii uu si fudud uga tago sida uu ku helay kulanka koowaad. Wuxuu aad noo jecelyahay si aad ah in uu si fudud nooga dhigo quudin saafi ah ama muuqaallo naxariis u leh masiirkayaga. Maya, jacaylkiisu jacayl buu bogsadaa, beddelaa oo beddelaa habka nolosha.
Marka la soo koobo, Axdiga Cusubi wuxuu si joogto ah u shaaciyey inuu ka jawaabayo bixitaanka shuruud la’aan ee naftiisa, oo ay ku jiraan wax kasta oo uu innaga inoo hayo, wuxuu gacanta la galayaa diidi nafsadeena (iska fogee nafteena). Tan waxaa ku jira daadinta kibirkayaga, diidmada isku-kalsoonida, samafalka, hadiyadaha iyo kartida, oo ay kujirto is-xoojinta nolosheena. Arintan, Ciise wuxuu si naxdin leh u sheegayaa in marka ay timaado raacitaanka Masiixa, ay tahay inaan "aabaheena iyo hooyada kala tagno". Laakiin wixii intaas ka dambeeya, isaga oo raacaya isaga waxay ka dhigan tahay inaynu sidoo kale ku khasbanaan doonno nolosheenna - annaga oo leh male-awaal qaldan oo aan nafteenna uga dhigi karno sayidkayaga (Luukos 14, 26-27, Good News Bible). Markaynu la fal galno ciise, waxaan joojineynaa ku noolaanshaha nafteena (Rooma 14: 7-8) maxaa yeelay waxaynu nahay kuwo kale (1 Korintos 6,18). Dareenka sidan ah waxaan nahay “adeegayaasha Masiixa” (Efesos 6,6). Nolosheena gebi ahaanba gacmihiisaa ku jirtay gacantiisa, waa gargaarkiisa iyo hanuunkiisa. Waxaan nahay waxa aan xiriir la leenahay isaga. Iyo sababta oo ah waxaan nahay Masiixa, "dhab ahaantii, anigu kuma sii noolaanayo, laakiin Masiix ayaa igu dhex jira" (Galatiya 2,20).
Runtii, Ciise wuu aqbalaa qof walba wuuna soo dhoweeyaa. Wuxuu u dhintay qof walba. Isaguna waa la heshiisiinayaa dadka oo dhan - laakiin waxaas oo dhan oo ah Sayidkeenna iyo Bixiyahayaga. Soo dhaweyntiisa iyo aqbalida nafteena waa dalab, casuumaad u baahan falcelin, rabitaan aqbal. Iyo rabitaankan aqbalaadda waxaa lagama maarmaan ah inuu ku xirnaado aqbalaadda waxa isagu, sida uu yahay, wuxuu diyaar u yahay inaan aqbalno - wax badan iyo wax ka yar. Tan macnaheedu waa in falcelinteena ay ka mid tahay toobinta - ka goynta wax kasta oo naga horjoogsanaya helitaanka waxa uu na siinayo, iyo waxa ku taagan jidka wadashaqeynta aan la leenahay isaga iyo farxadda ku noolaashaha boqortooyadiisa. Fal-celinta noocan ahi waxay ku lug leedahay dadaal - laakiin dadaal aad u wanaagsan ayaa mudan. Sababtoo ah lumisteena nafteenna hore waxaan u helnaa nafis cusub. Waxaan Ciise u abuurnaa meel bannaan oo ka helnaa noloshiisa beddelaya, oo nimcuu siinayo nolosha isagoo madhan. Ciise wuu ina aqbalaa meel kasta oo aan u istaagno inuu jidkiisa ugu qaado aabihiis xagga Ruuxa Quduuska ah hadda iyo weligiisba sidii caruurtiisa oo buuxda, oo ruux ahaan u soo nooleeyay.
Kumaa doonayey inuu kaqeyb galo wax ka yar?